Xaflad Taageernimo oo loo muujiyay Murashax General Asad Osman oo ka dhacdey Magaalada Minneapolis • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / Xaflad Taageernimo oo loo muujiyay Murashax General Asad Osman oo ka dhacdey Magaalada Minneapolis
Xaflad Taageernimo oo loo muujiyay Murashax General Asad Osman oo ka dhacdey Magaalada Minneapolis
December 11, 2018 - By: HORSEED STAFF
Dhamaan Bulsha waynta Somaliyeed ee Gobal ka Minnesota, ayaa xaflad maqaam keeda aad u sareeya waxey taageero buuxda u muujiyeen Murashaxa Madaxweynaha Puntland General Asad Osman Abdulahi.
Waxaa qayb ka ahaa bulshada noocyadeeda kala duwan, Dumar ka, Dhalnyarada iyo Odayaasha. Xalay Oo aheed habeen aad u qabow Magaalada Minneapolis baa hada na Somali badan iskugu Soo baxeen si ay taageero, talooyin iyo ducaba ba la wadaagaan Murashax Madaxweyne General Asad Osman.
Waxaa xusid Mudan xildhibaanada Dalka Mareykan ga Ilhan Omar oo xalay xaflada qayb wayn ka aheed. Waxey tilmaantey Murashaxa Madaxweynaha General asad inuu yahay shakhsi ku haboon inuu noqdo madaxweynaha Puntland, waxey qirtey in General Asad uu soo jiitey shacabwaynaha Somaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland. Waxey xustey arimaha khayri ga ah uu ka qayb qaatey sanadihii ugu danbeeyay, waxey na xustey inuu aqoon badan u leeyahay bulshada, maadama uu yahay daljoog.
Xaflada taageere ee Xalay ka dhacdey Magaalada Minneapolis waxaa ka dhex muuqdey Abwan ka wayn ee Orshe Oo caan ku ah heesaha loo curiyo Somalia iyo Puntland ba, asagoo xalay ku casumey fanaaniinta Waa wayn ee reer Minneapolis sida Hodan Abdirahman iyo Dalmar yare. Ayagoo heeso badan oo Murasharax Madaxweyne General Asad Osman loogu tala galey meesha ka qaadey. Waxaa sidoo kale ka dhex muuqdey xaflada xalay Somali Museum Oo soo bandhigey ciyaaraha hidaha iyo dhaqan ka.
Bulshada somaliyeed ayaa waxey gudoonsiiyeen Shahaado sharaf, ayagoo tilmaamey Murashax General Asad, inuu ka qayb qaatey, Arimaha amniga, abaaraha, dhireenta, agoonta, barakacayaasha, iyo dadka Masaakiinta ah, waxaa shahaadadaas ka guduumey gudoomiyaha Difaac iyo Dowladnimo Mudane: Mohamed Salaad Mohamud (Bosaso).
Jawiga xalay ayaa ahaa mid aad looga dareemayay farxad iyo hambalyeen. Jaaliyada ayaa wajiyadooda laga akhrisanayay iney ku qanacsan yihiin inuu General Asad Osman hogaamiyo Puntland shanta sano ee fooda nagu soo heesa.
Gabagabadii ayaa waxaa khadka telefon ka lagu soo xirey, Murashaxa Madaxweynaha Puntland General Asad Osman Abdulahi, asagoo ka mahad celiyay, Garashada iyo isxilqaan ka ay muujiyeen bulshada Gobal ka Minnesota, Wuxuu la wadaagey qorshihiisa siyaasadeed, wuxuu ka codsadey in dalka la yimaado oo wax lagu soo celiyo. Wuxuu bulshada Gobal ka Minnesota ku amaaney, isku xirnaanta, is caawinta iyo hormar ka ay ka gaareen dhinaca siyaasadeed, dhaqaalaha iyo sharafta ay bulshada kale ugu dhex nool yihiin.
Said Ali Bicir